DEG DEG: Shirkii Kismaayo oo la isku Khilaafay, Madaxweyne Xaaf oo go’aan yaableh qaatay & Rajadii Cumar C/Rashiid oo… | Baled Weyn Media Center
DEG DEG: Shirkii Kismaayo oo la isku Khilaafay, Madaxweyne Xaaf oo go’aan yaableh qaatay & Rajadii Cumar C/Rashiid oo…
Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland ayaa sheegaya in dib looga laabtay qodobo hordhac ah oo kasoo baxay shirkii maamul goboleedyada, taas oo keentay in madaxda ay ubaahnaadaan mudo dheeraad ah.
Shirka ayaa la filayay in lasoo gaba gabeeyo shalay oo talaado aheyd, laakiin qodobadii kasoo baxay ayaa waxaa ka dhashay khilaaf xoogan taas oo keentay in qodobada qaar lagu laabto.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar C/Rashiid laga duubay cod sir ah taas oo fashilisay waxyaabihii lagu heshiiyay
Madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa ka hor yimid qodoba dhowr ah Isagoona soo jeediyey in la sameeyo wax ay ku heshiiyaan maamul goboleedyada oo aysan qaadan fikirka dad kale.
Sidoo kale madaxweyne Xaaf ayaa ka hor yimid dalad ay yeelanayaan maamul goboleedyada, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in lagu badalo gudi farsamo oo ka imanaayo maamul goboleeydyada kuwaas oo ka shaqeynaayo waxii qilaaf ah ee ka dhaxeeya maamul gobooeedyada iyo dowlada Federaalka
Wararka ayaa sheegaya in Madaxweyne Xaaf uu sidoo kale ka hor yimid qorshe ay soo jeediyeen maamul goboleedyada oo ahaa in Turkiga oo ciidamo ku tababaraya Muqdisho uu ka baxo Soomaaliya.
Xaaf ayaa yiri “ Arimahq Dibadda ayaaba nagula heystayey ma hadaan dowlada Federaalka ku qabsanaa gaashandhiga, hadaan Turikiga soo hadal qaadno shacabkaaba na dhagaxyeynayaan marka waa in aan ka joognaa taa”.
Hadalkaas ayaa keenay in si deg deg ah qodobada looga saaro heshiiska hordhac ah ee maamul goboleedyada ay gaareen.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in isdabadal badan lagu sameeyay qodobada ay ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada.
Kulamada ayaa sii socon doona ilaa manta gelinka hore, waxaana la filayaa in heshiis rasmi ah ay gaaraan saacadaha soo socda.
La soco Wararkii kusoo Kordha Insha Allah